(၂၄-၁- ၂၀၁၀)ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော မြန်မာ အလုပ်သမား (၈)လောင်း၏ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း.။
(၂၄-၁- ၂၀၁၀)ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် ကျိုက်ပေါင်ကျေးရွာနေ
၈၊ စောအကုံ (အသက် ၂၈နှစ်) တို့၏ ရုပ်ကလပ်ကို ဒီကနေ့ မီးသင်္ဂြိုလ် သွားပါတယ်။
လိုက်ပါပို့ဆောင်သူ မြန်မာအလုပ်သမားပေါင်း (၁,၀၀၀)နီးပါးခန့်ရှိပါတယ်။
အသက်ခံရသူ (၉)ယောက်တွင် (၁)ယောက်မှာ ယနေ့အထိပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါသည်၊
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, February 13, 2010
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို ဘယ်သူ သတ်သလဲ
ငိုရတဲ့ သူတွေက ဒို့မြန်မာ
(၉၅-နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား လွမ်းဆွတ်တသ အစဉ်သတိရလျှက်)
တရုတ် ရေနံနဲ့ သဘာဝပိုက်လိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းသွားတော့မည့်
Corridor of Power Burmese-Lowquality
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)မှာ ကျင်းပတဲ့(၆၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း
63 Anniversary of Union Day
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, February 12, 2010
ယနေ့ကျရောက်သော(၆၃)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွင်ကျင်းပ ပြုလုပ်သောဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၃)၊၁၉၁၅ခုနှစ် တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အသက်(၉၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ
အဖဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ. ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၁၅ ခုနှစ်၊
အခုဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်သာ အသက်ထင်ရှားရှိရင်.......
လွတ်လပ်ရေးရဲ. ဖခင်ကြီး၊တိုင်းပြည်ကြီးရဲ. ဗိသုကာ၊ ဗမာ့တပ်မတော်ကြီးရဲ. ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊
အတ္တအကျိုးတွေပယ်ဖျောက် တိုင်းသူပြည်သားများ အကျိုးကိုယ်သာ ထာဝရရှေးရှု ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘ၀မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘ၀အထိ ပေးဆပ်ခဲ့၊
အဖရဲ. သားကြီး အောင်ဆန်းဦးလဲ အရှုးဖြစ်၊သမီးဖြစ်သူ အောင်ဆန်းစုကြည်လဲ အင်းယား ကန်ဆောင်း အိမ်ပျက်ထဲက အကျဉ်းသားပါ၊
အဖတည်ထောင်သွားတဲ့စစ်တပ်က သံဃာတွေ သတ်ဖြတ်လို. သာသနာလဲပျက်ပါပြီ၊
စစ်တပ်၊စစ်သားဆိုရင် ပြည်သူကရွံ.၊သံဃာက စွန်.၊နိုင်ငံတကာက ဂွတ်ဘိုင်တဲ့၊
တိုင်းသူပြည်သားတွေ လွတ်လပ်ဖို. အဖသမီးလဲ တိုက်ပွဲထဲမှာပါ၊
နယ်ချဲ.တော်လှန်ရင်း အောင်ဆန်း B.A လို.ဖြစ်လာခဲ့၊
ကိုအောင်ဆန်းတက်တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လဲ အလင်းပျောက်
ကျောင်းသားတွေ အဖလို B.A မရောက်၊
အဖတည်ထောင်သွားတဲ့ စစ်တပ်ကြီးက သံဃာတွေကို စော်ကား
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ. အမှတ်တရ
ဗိုလ်ချုပ်အောာင်ဆန်းမွေးနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သီချင်းတစ်ပုဒ်
( ၆၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)
ပြည်ထောင်စု ဖြိုခွဲသူ ဒို့ ရန်သူ။ ဘုံရန်သူ နအဖကို ချေမှုန်းကြ။
- လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့တော်လှန်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုအဖွဲ့ တွေအကြား အဖွဲ့ တွင်အကြားမှာ ချစ်ခင်စည်းလုံးမှုကို ဖျက်ဆီးဖို့ အတွက် အာဏာရူးတွေဟာ သွေးထိုးမြှောက်ပင့်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးများ မက်လုံးပေးခြင်း အစရှိတဲ့ ဖြိုခွဲခြင်းနည်းတွေသုံးပြီး လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အာဏာရူးတွေရဲ့လှည့်ကွက်နဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ ဟန်ဆောင်စကားတွေ မူယာများတဲ့ အပြုံးတွေ မစစ်မှန်တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းတဲ့ ပေးကမ်းချီးမြှင့်မှုတွေကို ရိုးသားစွာနဲ့စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှု ဘ၀လုံခြုံသာယာမှုရှိစေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကိုလိုလားကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဟာ ယုံကြည်မိလို့ အခုဆိုရင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲကြရပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ ဒီလို တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ရတဲ့ တရားခံကတော့ မြန်မာပြည်ကို မတရားအုပ်စိုးနေတဲ့ အာဏာရူးတွေကြောင့်ဘဲ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမ အားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဟာ လက်ရှိ အာဏာရူး နအဖဘဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီအာဏာရူးတွေ မတရားစိုးမိုးချယ်လှယ်ခဲ့တဲ့အချိန်က စပြီး ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုမှာ ပြည်ထောင်စုရဲ့သွေးသားအရင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့ သွေးစည်းညီညွှတ်မှုတွေ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတယ်။ နအဖအာဏာရူးဟာ ပြည်ထောင်စုနေ့ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) နေ့ဆိုပြီး အမြင်ကောင်းအောင် အခမ်းအနားကြီးတွေနဲ့စီစဉ်ကျင်းပနေပေမယ့် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းမှာ အထူးသဖြင့် ဝေးလံတဲ့ နေရာေးသတွေမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြရတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကတော့ နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ ဘ၀အသက်ပျက်ဆီးရတဲ့အထိ အခက်အခဲ ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ခံစားနေကြရတယ်။ - တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ရာ အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ဖျက်ဆီးခံနေရတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာနဲ့တည်ဆောက်နေထိုင်နေရတဲ့ ရွာတွေ တဲအိမ်တွေကို အာဏာရူးတွေရဲ့လက်ပါးစေတွေက မီးရှို့ ဖျက်ဆီးနေကြတယ်။ ကျေးလက်ဒေသက ရွာတွေကို နအဖအာဏာရူးတွေ တည်ဆောက်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေ လမ်းတွေအတွက် အတင်းအဓမ္မ နေရာဖယ်ရှားခံနေရတယ်။
- တိုင်ရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀အသက်အန္တရာယ်တွေကို စက္ကန့် နဲ့ အမျှ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ပူပန်နေရတဲ့ ရိုက်ပုတ်ထုထောင်းခံရခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းခံရခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းတို့ကို နအဖအာဏာရူးတွေရဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝအောက်မှ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။
တိုင်းရင်းသားပျိုဖြူတွေမကဖူး အသက်အရွယ် မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ် မရှောင် အိုမင်းမသန်မာတော့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို မရှောင် နအဖအာဏာရူးလက်ပါးစေတွေရဲ့ တဏှရာဂနဲ့ အဓမ္မကျင့်မှုအောက်မှာကြွေလွင့်ရရုံတင်မကဖူးအသက်ပါမချန်ရမ်းကားမိုက်ရိုင်းလွန်းတဲ့လူယုတ်မာတွေကြောင့် ဘ၀လည်းပျက် အသက်လည်း ထွက်ကြရတယ်။
- စစ်မြေပြင်နေရာဒေသမှာ မိုင်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့လူသားမိုင်းလို့ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ 
အသက်ကို ဖက်တစ်ရွက်လောက်တောင် တန်ဖိုးမထားဘဲ ရက်စက်စွာ ခိုင်းစေပြီး ရှေ့ ကနေ လျှောက်
စိတ်ဓါတ်ဆိုတာဘယ်မှာလည်း၊ပြည်ထောင်စုတည်မြဲရေးဆိုတာဘယ်မှာလည်း၊ပြည်ထောင်စုရဲ့အကျိုး ခံစားမှုဆိုတာ ဘယ်မှာလည်း၊ ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘ၀လုံခြုံမှုနဲ့ သာယာအေးချမ်း
မက်လုံးပေးဆွဲဆောင်ဖြားယောင်းစည်းရုံးမှုလုပ်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုစကားအရေးအသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေအကြား သွေးခွဲနေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေသာ ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားပြည်သူတွေအားလုံးဟာ အမှန်တကယ် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်ကြမယ်၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ဘ၀တွေ ပိုင်ဆိုင်လိုကြတယ်၊ အာမခံရှိတဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့ သာယာအေးချမ်းတဲ့ သွားလာစားသောက် နေထိုင်ရေးကို လိုလားကြတယ်၊ အမှန်တကယ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လုမှုဖူလုံရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး သက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုက်ကိုင်နိုင်ရေးတို့ ကို ပိုင်ဆိုင်လိုကြတယ်ဆိုရင်တော့ - - တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူ အာဏာရူးနအဖကိုသာ ဦးတည်ထားပြီး တော်လှန်တိုက်ခိုက်ကြပါ။ - တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေကို ရှောင်ရှားကြပြီး အာဏာရူးနအဖရဲ့ လှည့်ဖြားမှုတွေ ဖြားယောင်းမှုတွေ မက်လုံးပေးမှုတွေအောက် ရောက်ရှိနေရင် ရုန်းထွက်ကြပါ။ - နအဖရဲ့သွေးခွဲမှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နေရမှုတွေကို ဘုံရန်သူ အာဏာရူးနအဖဘက် လှည့်ပြီး ဦးတည်တော်လှန်ကြပါ။ ပြည်ထောင်စုကိုပြိုကွဲစေဖို့ဖြိုခွဲနေတဲ့သူဟာအာဏာရူးနအဖဘဲဖြစ်တယ်။
နအဖတွေရဲ့ဝါဒဖြန့်အတုအယောင်ပြည်ထောင်စုနေ့အတွက်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဆိုသူများကိုလက်အုပ်ချီ ကန်တော့ခိုင်းနေတဲ့သန်းရွှေ တို့အာဏာရူးစစ်ခွေးတစ်သိုက်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, February 11, 2010
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြည်သူလူထုကိုနောက်ဆုံးပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး ဘလော့ခ်ဂါ
အသက် ၉၆ နှစ်ရှိ အိန္ဒိယ လူမျိုး Florida ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်သူ Randall Butisingh လက်ရှိ ကမ္ဘာ အသက်အကြီးဆုံးဘလော့ကာ အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါပြီ။ Butisingh ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ Guyana မှာ ၁၉၁၂ ဒီဇင်ဘာတစ်ရက်နေ့က မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Butisingh အသက်အကြီးဆုံး ဘလော့ခ်ဂါ ပုဒ်ကိုတော့ အသက် ၉၇ နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ စပိန်လူမျိုး ဘွားဘွား Maria Amelia Lopez Solino ဟာ ကျန်ခဲ့ မေလ မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့လို့ အခု ဖိုးဖိုး Butisingh က အသက် ၉၆နှစ်နဲ့ လက်ရှိ ကမ္ဘာအသက် အကြီးဆုံး ဘလော့ဂါအဖြစ်ခံယူသွားခဲ့ပါပြီ။
ကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံး ဘလော့ဂါအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ရှိခဲ့တာကတော့ Ruth Hamilton ၁ဝ၉ နှစ်နဲ့ Olive Riley ၁ဝ၈ နှစ်တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Butisingh ကတော့ အခုထိ ဘလော့ခ် ပိုစ့်တွေကကို ကိုယ်တိုင်စာရိုက်ပြီး တင်နေပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဘွားဘွား Maria ကတော့ ပါးစပ်နဲ့သူရဲ့ မြေးကို ရွက်ပြပြီး စာရိုက်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုးဖိုး Butisingh က ကျွန်တော်ဟာ အလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ် ဒါတောင် တော်တော်ဖျားခဲ့တာ ကျွန်တော် အရာတော်တော် များများကို ကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ရေချိုးနိုင်တယ် အဝတ်အစား သူများလာဝတ်ပေးစရာမလိုဘူး၊ ကိုယ်မနက်စာ အတွက် ကိုယ်တိုင်ပြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တောင်ဝှေး မပါဘဲ ကိုယ်တိုင်လှမ်းလျှောက်နိုင်သေးတယ်။ အကိုက်အခဲပြောက်ဆေး တော့ သောက်ရတာပေါ့။ သွေးတိုးလည်းမရှိဘူး ပုံမှန် ၁၄ဝ/၇ဝ ဘဲလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Buxton မှာ ကြီးပြင်ခဲ့ပြီး ပညာကို အဲ့ဒီမှာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၂၇ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာ စာမေးပွဲအောင်ပြီး အဲ့မှာဘဲ ကျောင်းဆရာ ၄၅ နှစ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ မှာအနားယူခဲ့ပါတယ်။ Hamilton မှာ မြေး ၁၉ ယောက်နဲ့ မြစ် ၁၈ ယောက်ရှိပါတယ်။ အသက် ၈ဝ အရွယ်မှာ အာရေဗျ စာကိုသင်ယူခဲ့သလို ကိုးရီးယားစကားလဲ ကောင်းမွန်စွားပြောနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မေလက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အသက် ၉၇ ဘလော့ဂါ Maria Amelia Lopez Solino
ရှိသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ တိုက်ယူရတယ်။ အောင်ပွဲဆိုတာ တိုက်ရဲသူအတွက်သာ ဖြစ်တယ်။
Burmese American Citizen Man Was Sentenced to Five Years Imprisonment.pd
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, February 10, 2010
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကိုညီညီအောင် ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်ချမှတ်ခံရ....
အင်းစိန်ထောင်မှာ မတရားပုဒ်မတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံထားရတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားတဲ့ ကိုညီညီအောင်(ခ)ကိုကျော်ဇောလွင်အား အင်းစိန်ထောင်တွင်း တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ကိုညီညီအောင်ရဲ့ အမှုမှာလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့မနက် (၁၀)မှာ အင်းစိန်ထောင်တွင်းက တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ ကိုညီညီအောင် အမှုကို အမိန့်ချပါတယ်။ ပုဒ်မ ၄၆၈ မှတ်ပုံတင်အတုပြုမှု၊ ပုဒ်မ (၂၄)(၁) ငွေလဲလှယ်မှု နဲ့ ပုဒ်မ ၆ (၃) မှတ်ပုံတင် ဥပဒေအမှုတွေနဲ့ချတာပါ။ စုစုပေါင်း (၅)နှစ်ပါ .... ဒါပေမယ့် တပေါင်းတည်း ကျခံစေရမယ် ဆိုတဲ့ အမိန့်ကြောင့်(၃)နှစ်ကျခံဖို့ အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ "
....မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူထားတဲ့ ကိုကျော်ဇောလွင်(ခ)ကိုညီညီအောင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလ၃ရက်နေ့က ရန်ကုန်မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်၌ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီး ၁၇ရက်နေ့က အင်းစိန်ထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကိုညီညီအောင်အား လိမ်လည်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း အတုပြုမှု တရားမဝင် နိုင်ငံခြားငွေ ကိုင်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် စစ်အစိုးရမှ တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုးစုံ ခံခဲ့ရပြီး ၂၀ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်သံရုံးမှ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ထောင်တွင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရကြောင်း တွေ့ရှိရတဲ့ အတွက် အမေရိကန်သံရုံးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဥပဒေအကြောင်းအရ တရားမျှတမှုရှိမရှိ မေးမြန်းရာမှာတော့ " အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ တချို့အချက်တွေကို သဘောမတူဘူး၊ တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့မြင်တယ်။ အပြစ်ဒဏ်တွေကတော့ ဥပဒေအတိုင်းလို့ ယူလို့ရပါတယ် " ဒီနေ့အမှု တရားရုံးကို အမေရိကန်သံရုံးက ကောင်စစ်ဝန်ကိုယ်တိုင် လာပါတယ်။ သေချာမှတ်သားသွားပါတယ်။ အန်ကယ်တို့က သေသေချာချာ ရှင်းပြပါတယ်။ အပြစ်တွေ့ရှိတယ် ဆိုတဲ့ တစ်ချို့အချက်တွေကို သဘောမတူတာပြောပြပါတယ်. ... အယူခံဝင်ဖို့လည်းပြောပြပါတယ်။ ကောင်စစ်ဝန်က တတ်နိုင်တာကို အကူအညီပေးမယ်လို့ ပြောပြသွားပါတယ်။"
ကိုညီညီအောင်ဟာ ထောင်တွင်း အကျဉ်းသားချင်း ခွဲခြားမှုတွေ၊ မတရား လုပ်နေမှုတွေ၊ ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်မှုတွေအတွက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရအကျဉ်းထောင် အတွင်းက တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုလည်း မကြောက်မရွံ အခါအားလျှော်စွာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကိုညီညီအောင်အား အကျဉ်းထောင်အတွင်း အကာအရံများဖြင့် တခြားအကျဉ်းသားမျာနဲ့ သီးခြားဖြစ်အောင် ထားရှိခြင်းခံရပါတယ်။ကိုညီညီအောင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူ ညီမဖြစ်သူနဲ့ မိသားစုဝင် ၅ဦးမှာလည်း နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်းခံနေရပါတယ်။
" ကိုညီညီအောင် စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်း ကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ်။ ကိုညီညီအောင်က ထောင်ဝင်စာ မတွေ့ရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မကျေမနပ်ပြောပါတယ်။ ထောင်ဝင်စာ ပစ္စည်းတွေ လက်ခံဖို့ကိစ္စအတွက် အရင်လိုအချုပ်သား တယောက်မဟုတ်တော့ဘူး ... ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ အကျဉ်းသား တယောက်အနေနဲ့ ပစ္စည်းတွေ လက်ခံပါဆြိုပီး ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ကစပြီး ပြန်လက်ခံနေပါပြီ" ဟု ကိုညီညီအောင်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလို စစ်အာဏာရှင် စံနစ်အုပ်စိုးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ မိမိတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်တဲ့ သူတွေဟာ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း ခံကြရပါတယ်။ နှစ်ရှည်လများ ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူတွေ အကြောက်တရားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် မတရားလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း မတရားမှုကို ခေါင်းငုံမခံတဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ လျော့ပါးသွားတယ်မရှိပဲ ရတဲ့နည်းနဲ့ တော်လှန်နေကြသူတွေကတော့ နေရာကဏ္ဍ အမျိုးမျိုးကနေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
နိုင်ငံရေး - ဟာသများ..
ကြံ့ ဖွတ်တွေ လမ်းခင်းနေပါတယ်။ ခင်းနေတဲ့လမ်းတွေအတွက် အခမဲ့လို့ဆိုပြီး အသပြာလေးတော့ မ, စပါတဲ့။
ရန်ကုန်မြို့ မှာ လမ်းတွေကို ကတ္တရာလမ်းတွေ ကွန်ကရစ်လမ်းတွေ ခင်းနေပါတယ်။ ခင်းတဲ့လမ်းနေရာတွေမှာ ဆိုင်းဘုတ်တွေ အလံတွေထောင်လို့ ထားကြပါတယ်။
“ရန်ကုန်တိုင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်းကြီး၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကွန်ကရစ်လမ်း ပြုလုပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်နေပါသည်” ဆိုတဲ့ ကြံ့ ဖွတ်အဖွဲ့ ကြီးရဲ့ဆိုင်းဘုတ်နဲ့အလံတွေပါ။
လမ်းခင်းတဲ့ ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ဒီလို လမ်းခင်းရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရပ်ကွက်တွင်းနေ ပြည်သူများကို ခေါ်ယူပြီး အစည်းအဝေးလိုမျိုး ရှင်းပြပြောဆိုကြပါတယ်။
လမ်းပြင်နေတဲ့ အချို့ ရပ်ကွက်တွေက ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာဆိုရင် “ပြည်ထောင်စုကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်းကြီးမှ စေတနာဖြင့် အခမဲ့ ခင်းပေးနေသည်” လို့ ပါ ရေးထားတာ တွေ့ ရှိရပါတယ်။ ရေးထားတော့ အခမဲ့ခင်းပေးတယ်ဆိုပြီး စေတနာကြေးလိုလို သတ်မှတ်ကြေးလိုလိုနဲ့ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူတွေဆီက မတရားငွေတောင်းခံနေတာကတော့ ပေါ်တင်ကြီး လိမ်ညာတာပါဘဲ။
ဆင်းရဲငတ်ပြတ်လို့ လမ်းဘေးမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တောင်းရမ်းစားသောက်နေတဲ့ သူတောင်းစားထက်တောင် ဆိုးနေတဲ့ ကြံ့ ဖွတ်နဲ့ရယကတွေပါဘဲ။ ရပ်ကွက်အချို့ မှာ လမ်းခင်းခ တစ်အိမ်ထောင်ကို (၃) သောင်းကနေ (၅) သောင်း ထည့်ခိုင်းပါတယ်။ အချို့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ဒီထက်ပိုတောင်းပါတယ်။
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းတဲ့နေရာမှာလည်း ကြေညာတော့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်းကြီးက ဦးစီးခင်းကျင်းသော သံကူကွန်ကရစ်လို့ဆိုပြီး လမ်းခင်းတဲ့ ကွန်ကရစ်ထဲမှာ သံချောင်းနဲ့ တူတာ တစ်ခုမှတောင် မပါဖူး။ ဒီကွန်ကရစ်လမ်း ဘယ်လောက်များ ခံမလည်းဆိုတာ တွေးသာကြည့်ကြပါတော့။ မြန်မြန်ပျက်တော့ နောက်ထပ် မြန်မြန်ပြန်ခင်းရပြီး မြန်မြန် ငွေပြန်ညှစ်လို့ ရတာပေါ့။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်းကြီးက ခင်းပေးပါတယ်ဆိုပြီး ဒီလမ်းခင်းဖွင့်ပွဲကြရော ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်တွေဟာ ငွေညှစ်တောင်းခံထားလို့ ရတဲ့ ငွေတွေနဲ့လမ်းဖွင့်ပွဲလုပ် မော်ဒယ်မလေးတွေခေါ်ပြီး ကြံ့ ဖွတ်က အကောင်ကြီးတွေ ရယကက အကောင်ကြီးတွေ သရေတမြားမြားနဲ့ပါးစပ်ဖြဲပြီး မစေ့တော့တဲ့ သွားအကုန်ပေါ်အောင် ပြောဆိုကြပြီး ဖွင့်ပွဲတွေ နာမည်ယူ လုပ်ကြပါတော့တယ်။
လမ်းခင်းတယ်လို့ပြောတာက ကြံ့ ဖွတ်၊ လမ်းခင်းခ ပေးရတာက ပြည်သူ။
လမ်းခင်းပွဲ နာမည်ယူတာက ကြံ့ ဖွတ်၊ လမ်းပျက်လို့ပြင်တော့ ပေးရပြန်တာက ပြည်သူ။
ဆိုင်းဘုတ်အသစ် ထောင်ဖို့ ကတော့ “ကြံ ဖွတ်များ လမ်းခင်းနေကြပါတယ်။ ဝေးဝေးက ရှောင်ကြပါ” လို့ ပါ။ “ရှောင်လေဝေးဝေး ကြံ့ ဖွတ် ဘေး”။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.
လှိုင်သာယာစက် မှု့ ဇုံ(၃) မှ အလုပ်သမားများ၏ဆန္ဒပြပွဲဓာတ်ပုံနှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏တောင်းဆိုချက်များ
(၂၄-၁- ၂၀၁၀)ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသောြ...
တရုတ် ရေနံနဲ့ သဘာဝပိုက်လိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်သ...
( ၆၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်...
ကြံ့ ဖွတ်တွေ လမ်းခင်းနေပါတယ်။ ခင်းနေတဲ့လမ်းတွေအတွက...
လှိုင်သာယာစက် မှု့ ဇုံ(၃) မှ အလုပ်သမားများ၏ဆန္ဒပြပ...
နအဖ ရဲ့ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်က ဆောက်လက်စ ပါလီမာန် အဆေ...
တရားဝင်စစ်ကျွန်မဖြစ်ဘို့ စစ်အခြေခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင...
တပ်မတော်သားတွေ လေးစားချစ်ခင် အားကိုး ယုံကြည်ကြတဲ့ ...
အောင်ဆန်း ပေးတဲ့ မြန်မာပြည်
သျှမ်းပြည်နယ်နေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ။
ABMA ဂျာနယ် (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင...
Voice Of Burmar စာစောင်
The Voice6-14 စာစောင်
မြန်မာ တို့ ရဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာသံဃာတော်များသတ်သူမ...
၂၀၁၀ ခုနှစ် မြန်မာ့ယုတ်ချဉ်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ။
ကိုကျော်သူ ရဲ့ သတ်ကွင်း